Wax Badan Ka Baro iibka - iibka.com
1- Badeecadda sawir ka qaad.
2- Riix badhanka kore ee ay ku qoran tahay: PUBLISH LISTING.
3- Gali badeecaddaada ama adeegaaga, adiga oo reebaya lambar ama email lagaala soo xariiro.
5- Hadii aad caawinaad u baahan tahay nala soo xariir, si aan kaaga caawino xayaysiinta badeecaddaada ama adeeggaaga. Fadlan #share iibka.com, si Soomaali badan uu uga caawiyo in ay badeecadahooda iyo adeegyadooda ku kala gataan, dalka oo dhan.